အုပ်ထိန်းသူများထင်ရှားကြ၏ | Apg29
697 online! | Sidvisningar idag: 243 799 | Igår: 266 491 |
သငျသညျယရှေုခရ၏ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောဖို့ဟုခေါ်ကြသည်နှင့်မည်သို့ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်ရန် - သငျသညျကငျးစောငျ့ခံရဖို့မချေါမကြသည်!
ငါအင်တာနက်အပေါ်နေသော Self-ခနျ့အပျအုပျထိနျးသူထုတ်ဖေါ်နှစ်ခုဆောင်းပါးများကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေကြပြီ။ စောင့်ကြည့်အခြေခံအားဖြင့်အထဲကဘုရားသခငျသညျမဆိုသတိရှိသည်ပါဘူးအရာအားလုံးကိုထိုမှားသောအယူများပေမယ့်တရားသူကြီးကသတိပေးနှင့်ဖော်ထုတ်အခန်းကဏ္ဍအပေါ်ယူကြပြီသောသူဖြစ်ကြ၏။
ငါသောဆောင်းပါးတစ်ခုမှာ ရေးထားပြီအလွန်တိုတောင်းသည် ။ ငါလုံးဝကထုတ်ဝေပြီးနောက် "ပစ်ခတ်ခဲ့" ခံရမယ်လို့ထင်ပေမယ့်အများအပြားငါနှင့်အတူသဘောတူညီခဲ့ကြသည်။ ဒုတိယဆောင်းပါးရှည်နဲ့ကရေးသားသည် ကိုဒါဝိဒ် Wellenstam ။ ဒါဟာချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏နှင့်အစောင့်များတို့သည်စုစုပေါင်းထုတ်ဖော်ပြသသည်။
၏သင်တန်း, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ခန့်အပ်ထားအုပ်ထိန်းသူများကဤမှပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်နှင့်သူတို့ကြောင့်သူတို့လိုအပ်ဖြစ်ကြောင်းငြင်းခုန် "ဤမျှလောက်များစွာသောမဟုတ်ပါဘူး။ " ဟုတ်တယ်, အဲဒီလက်ျာရဲ့ထိုသူတို့သည်များစွာသောမဟုတ်, ဆဲအင်တာနက်ပတ်ပတ်လည်ဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်ခြင်းနှင့်သူတို့အများအပြားပါလိမ့်မည်သော်လည်းအဖြစ်ဆူညံသံ၏တွေအများကြီးအောင်။ ဒါပေမယ့်သူတို့တစ်တွေကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်နောက်ကွယ်ကအိမ်မှာထိုင်လူတိုင်းနှင့်အရာခပ်သိမ်းကိုဝေဖန်နှင့်အရှုံးခံ။
သူတို့ကသင်တန်းယူဖောက်ပြန်မှုရှိစေခြင်းငှါ, ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အရှိမသွားရဲသောကြောင့်, လူများ, အသင်းတော်ကိုမှအိမ်ပြန်နေဖို့ရကို၎င်း, စီရင်စုနယ်၏အချို့သော "အုပ်ထိန်းသူ" ဖြေရှင်းနိုင်။
တချို့ကအုပ်ထိန်းသူများဆောင်းပါးတွေဆန့်ကျင်နေတဲ့ကာကွယ်ရေးနှင့်အတူတက် လာ. ထိုကြောင့်အစောင့်ကိုခေါ်နေသောခရစ်ယာန်တွေ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းကိုပြောဆိုကြပြီ။ (သူတို့ကလူတိုင်းကသူတို့ရဲ့ညီအစ်ကို, ညီအစ်မတွေရဲ့အမှားနှင့်ချို့ယွင်းချက်ကိုရှာဖွေနိုင်မည်ဖြစ်သင့်ကြောင်း။ ငါကကူညီပေမယ့်ရှတာဇီထိန်းချုပ်မှုကိုစဉ်းစားငါသည်ဤရေးထားအဖြစ်စနစ်များ Tipping မနိုင်ဆိုဆိုလို။ )
မဒီကျမ်းစာနဲ့ကျနော်တို့ဆရာယောဟနျသညျယရှေုနဲ့ပတေရုနောက်တော်သို့လိုက်သောအဖြစ်အပျက်နားလည်ပါတယ်။ ပေတရုသည်ယောဟနျနှငျ့ဖွစျလိမျ့မညျကိုဘယ်လိုသညျယရှေုမေးလျှင်, ဒါပေမယ့်သူကသူ့ကိုနှောငျ့ယှကျမညျမဟုတျကွောငျးကိုကြားပြောလေ၏, ဒါပေမယ့်သူကယေရှုနောက်တော်လိုက်လိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာတခြားလူအများကြီးအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ရမစဉ်းစားသင့်ပါ - ငါတို့သည်သညျယရှေုကိုအောက်ပါအတွက်စေ့စပ်လိမ့်မည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အစောင့်ခေါ်ကြသည်ဆိုဖို့ကလုံးဝကျမ်းစာနှင့်မညီကျနော်တို့မဟာကော်မရှင်နားလည်မှိုင်းတိုက်သည်။
ယရှေုသညျအကြှနျုပျတို့တှငျအသွားနှင့်အသီးအသီးအခြားအပေါ်စောင့်ကြည့်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဘယ်တော့မှမ။ အဘယ်သူမျှမကသူကျွန်တော်ထွက်သွားနှင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့အားဧဝံဂေလိတရားကိုဟောမယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဒီဧဝံဂေလိတရားကိုယုံကြည်သောသူများသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်, ယုံကြည်သောသူမူကားမပါဘူးအပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ကိုယရှေုကဘယျသို့ပွုနှင့်အရာအားလုံးထက်မတှေ့ကွပါစို့။ တစ်ဦးသမ္မာကျမ်းယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရားနှင့်အတူလုပ်ဖို့သမျှသည်အဘယ်အရာကိုမျှရှိကြောင်းထို့အပြင် "väktartjänsten '' ကိုယ်ပိုင်ယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရား။
ငါ့အဆွေခင်ပွန်း, ငါသည်ဤဆောငျးပါးနှစျခုထုတျဝထေားကြောင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကိုပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ သူတို့ကတခါအပေါင်းတို့နှင့်အဘို့အစောင့်များပေါ်ထွန်း!
အခုတော့ ထွက်. ယရှေုကိုလူအနိုင်ရနှင့်အချင်းချင်းအပေါ်အစာကျွေးဖို့ရပ်တန့်!
သငျသညျအယူမှားအယူဝါဒထင်ရှားအဖြစ်ယေရှုသခင်အဖြစ်ခရစ်တော်နှင့်ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းဟောပြောအလုပ်များနေတဲ့အခါဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့မျက်နှာပြင်မှ pop နှင့်တစ်လျှောက်လုံးထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်။ လာတဲ့အခါ
ငါသည်ဤဘလော့ဂ်ကို, Apg29 အပေါ်မှားသောအယူများထုတ်ဖေါ်နိုင်ဒါကြောင့်ပါပဲ။ ငါဝငျကမျြးနှငျ့အကြှနျုပျကို employ နှငျ့ယရှေုဗဟိုပြုကတည်းကတစ်စုံတစ်ဦးသို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကိုငါ၏သခင်ယေရှုခရစ်ကိုဖုံးကွယ်လိုလျှင်ကျွန်မချက်ချင်းသတိထားမိမှာ။
Apg29 väktarbloggခဲ့နဲ့ဘယ်တော့မှဖွစျလိမျ့မညျကိုဘယ်တော့မှမဟုတျဘဲဖြစ်ပါတယ်။ Apg29 လူသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရပါမည်ကိုဘယ်လိုရှင်းပြသောတစ်ဦးဧဝံဂလိဘလော့ဂ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ Apg29 ရှာတွေ့ပြီးနောက်, အမျိုးသမီးတစ်ဦးအကြှနျုပျကိုချေါ့အခြားနေ့ကနှင့်သူမfrälst.Underနှစ်ပေါင်းလိမ့်မည်ဘယ်လောက်အံ့ဩများစွာသော Apg29 တွေ့ပြီသောသူသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ယေရှုခရစ်သည်လူကိုအနိုင်ရမှ: ဒါဟာ Apg29 အဘို့ဖြစ်၏နှင့်ဤသူသည်သင်တို့ကိုခေါ်ကြသည်ကားအဘယ်သို့သောဤဖွစျသညျ!
väktarbloggandetနှင့်အတူ 12 ပြဿနာများ
နျူကလီးယားမိသားစုဆန့်ကျင်သမဂ္ဂ၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများ၏ဖြစ်ပွားနေသောဝါဒဖြန့်ရှိခဲ့သည်။ ယခုလာမယ့်ခြေလှမ်းလာ: မယားအမြားယူ၏ဝါဒဖြန့်သည်ယခုဆွီဒင်နိုင်ငံတွင်စတင်ခဲ့သည်။
ဖြစ်နိုင်ပါကအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု - Helsingborgs &
Helsingborg အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်တစ်ဦးဗုံးတိုက်ခိုက်မှုများအတွက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မပြုလုပ်ရပါ။ "တစ်ဦးကဖြစ်နိုင်သမျှအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု," ကြောက်မက်ဘွယ်သောအကျွမ်းကျင်သူ Magnus Ranstorp ကဆိုသည်။
အဲဒီမှာအမျိုးမျိုးသောအမှန်ဆိုရလျှင်ဆန့်ကျင်ခက်ခဲတဲ့ကြောင်းကိုခရစ်ယာန်တစ်ဦးဆွီဒင်ဘလော့ဂ်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သကဲ့သို့, မြေကြီးသည်ပြားကြောင်း Self-ကြွေးကြော်ခြင်းနှင့်အန္တရာယ်မူးယစ်ဆေးဝါးဆေးခြောက်ပြန့်ပွား! ဟုတ်ပါတယ်, သင်ပိုင်ခွင့်ကိုဖတ်ရှု! ကမ္ဘာကြီးကိုခေါင်းမူးပါ!
Christer Åbergကစားခြင်းနှင့် Lindberg နှင့်အတူသီဆိုခဲ့ကြခြင်းနှင့် Halltorp Philadelphia တွင်ကစားသမားရောထွေးအိတ်ဆွဲထုတ်။
လူအတော်များများ Lindberg Halltorp Philadelphia တွင်အစည်းအဝေးအပေါ်ပျော်စရာရှိသည်!
အိုရာကျုံး! - Lindberg gitarboogie ကစားခဲ့သည်!
Lindberg တစ်လူစည်ကား Halltorp Philadelphia တွင်အိတ်ရောနှောဆွဲကစားသမားနှင့်အတူ gitarboogie ကစားခဲ့သည်!
တစ်အွန်လိုင်းစတိုးမှာ, "သာ costume slutty စုန်းကလေးတွေ" နှင့်ကလေးငယ်များအတွက် "နာခံမှုမရှိသောhondjävul" အမိန့်အခြားအမှုအရာတို့တွင်။
Vecka 42, torsdag 19 oktober 2017 kl. 23:43
ကညာမာရိသည်မိမိဝမ်းကိုယရှေုကိုဘှားမွငျ, ဒါပေမယ့်သူကသူမ၏မကယ်မနှုတ် - သူမကမိမိတို့စိတ်နှလုံးထဲမှာသညျယရှေုကိုလက်ခံဖို့ရှိပါသလားသူ့ကိုသယ်ဆောင်ရန်လိုအပ်!
BrorK: Propagandan för polygami har nu startat i Sverige
Håkan Juholt: ဆွီဒင်အာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်လာ
ယခင်လူမှုဒီမိုကရက်ပါတီခေါင်းဆောင်Håkan Juholt အဆိုအရကျွန်တော်တစ်ဦးဒီမိုကရေစီပေမယ့်တစ်ဦး technocracy, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးအာဏာရှင်စနစ်သို့သွားကြသည်မဟုတ်။
အားဖြင့် Reader ကိုမေးလ် nils
ဧည့်သည်များ Alexa အဆင့်အရသိရသည် Apg29 ပေါ်တွင်အရ
ရှငျဘုရငျလိမ့်မည် - ကောင်းကင်ဘုံ TV7 အတွက်အ&#
ဆွီဒင်ရဲ့ cashless 2023
အဆိုပါ app များကိုအိပ်ဘယ်တော့မှ
697 online! | Sidvisningar idag: 243 805 | Igår: 266 491 |